Sei kuenda kuSauna kunokosha - sauna yevatangi
Mazano ekushanyira sauna kutanga
Ndezvipi zvakarongeka zvakakodzera zvechidzidzo che sauna?
Nguva dzose zvidzidzo zve sauna hazvisi zvakanaka chete kune utano hwako hwepanyama, asiwo kuti ugare wakanyarara. Kwete kuongorora kwakaratidza kuti pane mamiriyoni e5 evanhu vane 2 mamiriyoni saunas muFinland. MuGermany zvakare, vanhu vakawanda vari kupika nehuwandu hwehutano-kukurudzira zvinowanikwa pamuviri, ganda uye pfungwa.
Sei zvakakodzera kuenda kuSauna?
Kunyanya munguva yezvinotonhora, zvinonzwisisika kuva nesuna nguva dzose. Kuburikidza nesauna, mhuka yose uye maitiro ezvirwere zvemumasimba zvinosimbiswa, izvo zvinogona kunge zvisingaiti zvakare hutachiona hwehutachiona.
Kune vanhu vari kuwedzera kutambura nekurwadziwa shure kana kushungurudzika, zvinokurudzirwa kuenda kumusasa. Nokuda kwemigumisiro yakanakisisa, murwere anorwadza anofanira kunge akarara mudumbu rake nguva yakawanda, kuitira kuti kupisa kubva kumucheka we sauna kunopenya zvakananga kumashure. Izvi hazvisi kungoita kuti mutsva mushure, asiwo mweya. Zvisinei, hazvina kukosha kurara pano nguva dzose, asiwo kugara mukati kuti kuchengetedza kupararira kwakasimba. Dambudziko reRheumatic rinogona kuderedzwa nekushanyirwa kwesauna nguva dzose.
Nokuti zvimwe zvirwere zveganda, zvakadai semakone, sangano revhiki nevhiki rinofanira kurongwa. Iko kupisa kunonatsa zvishoma nezvishoma ganda rinenge rakavharwa ne sebum. Izvi zvinokurumidza kupora kurapa kwakanyanya.
Sauna inokurudzirwa kwete chete pamigumisiro yayo pamuviri, asiwo pakugadzirisa mupfungwa. Vanhu vazhinji vari kuwedzera vari kutambura nekutya uye kushungurudzika, zvose zviri zviviri zvinogona kubudirira kuputsika nekuenda ku sauna. Kushanyira sauna kunokurudzirwawo nekusawirirana kwekurara, sezvo kutuka kunokurudzira kunyatsova kuneta, izvo zvinoita kuti tibate hope nekukurumidza uye kutanga zuva rakanyatsochengetwa mangwanani.
Kushamwaridzana kwesauna kunobatsira zvikuru kune munhu wose. Iyo inopisa inopisa inoputika neganda mumuviri wose uye kupisa kwemuviri kunokwira kusvika ku 3 ° Celsius. Nenzira iyi, mabasa ose emagetsi anowedzera, kupararira kunowedzera uye kudzivirirwa kwomuviri kunowedzera kusimba.
• Zvakakosha kucherechedza musati marwendo rumwe rwese kuenda kune sauna iyo sauna uye nekukurumidzira kusasangana. Kune imwe sauna inoshanyira nguva yakakwana inofanirwa kurongwa kuti izorore uye iwane zvakanaka.
• Chengetara chete uye shangu dzinofanira kuendeswa mu sauna. Zvose zvishongo zvinofanira kubviswa zvisati zvaitika, nokuti zvinopisa zvinopisa uye zvinogona kukuvadza. Zviri nani zvakare kusiya magirazi kunze uye kuti udzoke kumashure lenzizi, nokuti rubatsiro rwekuona runenge ruchiita pakarepo.
• Zvichida, inofanira kudziviswa kuti inzwe nzara mu sauna kana kuti idye zvisati zvanyanyisa, sezvo izvi zvisiri zvakakwana pakupararira. Saizvozvowo, zvinwiwa zvinodhaka hazvifaniri kudhakwa panguva yechikamu chesauna.
• Avo vanobuda mumhepo inotyisa havafaniri kukwira zvakananga mudziva rekushambira, asi kutanga zvishoma nezvishoma kunotonhora mumvura uye wotanga kushambira.
• Paavhareji, 1 uye 2 maita emvura yemvura anorasika paunotora sauna, iyo inofanira kudzorerwa mumuviri nekukurumidza. Izvi zvakakodzerwa zvakakwana zvechiri mvura yemvura.
Usati wasvika mu sauna unofanirwa kunyatsoderedzwa kuti ubvise muviri wehupi chero upi zvake. Zvadaro yakaoma zvakanaka, kuitira kuti jira iri mumusasa risagadziriswa nemvura yakasara.
Pakutanga, hove yekushambidza inofanira kuiswa muimba ye sauna pakati nepakati pebhangi rakakwirira, pane iyo porter sauna inogona kugara pasi kana kurara pasi. Kutarisa sauna kunofanirwa kunge kwakanakisisa kune zvidzidzo zviviri kana zvitatu zve sauna. Muviri unoda pakati pe8 nemaminitsi 10 kuti asvike pakupisa, asi kana kupisa kunonzwa kusanzwisisika zvisati zvaitika, mutambo unofanirwa kutanga kutangwa.
Mushure mokunge sendi yekutanga yekugadzirira, tinokurudzira hodha inotonhorera kana inotonhora inoteverwa nebhadharo yemhepo uye nguva yezororo ye 20 ne hydration. Kuti uchengetedze kupararira munguva yekunaya mvura inotonhora, zvinokurudzirwa kumhanya mvura pakutanga pamusoro pechechi yakarurama, pamusoro pemakumbo nemaoko, uye zvinoenderera mberi nerutivi rworuboshwe kubva kumusoro kusvika pasi. Mushure mekunge sauna inogona kushanyirwa zvakare kwe12 kusvika kumaminitsi e15.
Kazhinji zviri nani kugara mu sauna pane kurara pasi. Somugumisiro, kwete chete kupararira kunowedzera zvakasimba, asi pores zvakare inozarura zviri nani. Pakutanga kushanyira sauna iwe unofanirwa kushandisa mabhenchi ari pasi, sezvo isisina kupisa ipapo.